ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ဆှတျခူးနိုငျဖို့ မနျစီးတီးတို့ ဘာလိုအပျနလေဲ? – ဟားလော့ - SPORTS MYANMAR
ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ဆှတျခူးနိုငျဖို့ မနျစီးတီးတို့ ဘာလိုအပျနလေဲ? – ဟားလော့
By Edi Tor October 13, 2019
မနျခကျြစတာစီးတီး အသငျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ဆှတျခူး နိုငျဖို့ အတှကျ လိုတာထကျတောငျ ပိုကောငျး နပေမေယျ့ ပကျဂှာဒီယိုလာ ရဲ့ အသငျး အနနေဲ့ ဒီရာသီ ဥရောပ ဆုဖလားကို ကိုငျမွှောကျ နိုငျဖို့ အတှကျ ဆိုရငျ ကံတရား အနညျးငယျတော့ လိုအပျ နတေယျလို့ ကှငျးလယျ ကစားသမားဟောငျး ကယျဗငျဟားလော့က ပွောလိုကျ ပါတယျ။
စီးတီးဟာ ဥရောပ ရဲ့ အမွငျ့ဆုံး ဆုဖလားကို သမိုငျးတဈလြှောကျ တဈကွိမျမှ ဆှတျခူး ထားခဲ့ခွငျး မရှိသေးဘဲ အဆိုပါ ပွိုငျပှဲမှာ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျမှု ကတော့ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅-၁၆ ဘောလုံး ရာသီက နညျးပွ မနျနူရယျ ပယျလီဂရီနီ ရဲ့ လကျအောကျမှာ ဆီမီးဖိုငျနယျ အဆငျ့ထိ တကျနိုငျ ခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပကျဂှာဒီယိုလာဟာ အဆိုပါ နှရောသီမှာ ပယျလီဂရီနီရဲ့ နရောကို အစားထိုး ၀ငျရောကျ လာခဲ့ပွီး ဘာစီလိုနာ အသငျးကို ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ၂ ကွိမျ ဆှတျခူး ပေးခဲ့တဲ့ စပိနျ နညျးပွရဲ့ မှတျတမျးကွောငျ့ စီးတီး တို့ဟာ သူတို့ အသငျးကို ဥရောပ အောငျမွငျမှု ရယူ ပေးနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ ထားခဲ့ ကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ဂှာဒီယိုလာဟာ စီးတီးမှာ ကှာတားဖိုငျနယျ အဆငျ့ကို ကြျောဖွတျ နိုငျခဲ့ခွငျး မရှိသေးဘဲ သူရဲ့ ပထမရာသီမှာ မိုနာကို အသငျးကို နောကျဆုံး ၁၆ သငျး ရှုံးထှကျ အဆငျ့မှာ ရှုံးနိမျ့ ခဲ့သလို နောကျရာသီ မှာလညျး လီဗာပူးကို ကှာတားဖိုငျနယျမှာ ရှုံးကာ ပွိုငျပှဲမှ ထှကျခှာ ခဲ့ရပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီကလညျး မနျစီးတီးဟာ တော့တငျဟမျ နဲ့ အကွိတျအနယျ ကစားခဲ့ရပွီး အဝေးကှငျးမှာ ၁-၀ နဲ့ ရှုံးခဲ့ကာ အီတီဟတျ မှာ ၄-၃ နဲ့ နိုငျခဲ့ပွီး ပှဲခြိနျ နောကျဆုံး မိနဈမှာ ဂိုးရခဲ့ ပမေယျ့ VAR နဲ့ ပွနျလညျ ပယျဖကျြခွငျး ခံခဲ့ ရပွီး ကံမကောငျးစှာနဲ့ ကှာတားဖိုငျနယျ အဆငျ့ကပဲ ထှကျခှာ ခဲ့ရပါတယျ။
စီးတီးဟာ သူတို့ရဲ့ ဥရောပ ပွိုငျပှဲမှာ စိတျပကျြ ခဲ့ရမှုကို ပွညျတှငျး ပွိုငျပှဲမှာ ပွနျလညျ ဖာထေး နိုငျခဲ့ပွီး ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလားကို ၂ နှဈဆကျ ဆှတျခူး ထားခဲ့သလို ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက တဈရာသီ အတှငျး ပွညျတှငျး ဖလား ၃ လုံး စလုံးကို သိမျးပိုကျ နိုငျတဲ့ ပထမဦးဆုံး အသငျး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
စီးတီး အတှကျ ပှဲပေါငျး ၂၀၀ ကြျော ကစားပေးခဲ့တဲ့ မွောကျအိုငျယာလနျ လကျရှေးစငျဟောငျး ဟားလော့ ကတော့ လကျရှိ စီးတီးရဲ့ လူအငျအားဟာ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလားကို ကိုငျမွှောကျနိုငျစှမျး ရှိလောကျအောငျကို ကောငျးမှနျမှု ရှိတယျလို့ ဆိုလိုကျပွီး ဂှာဒီယိုလာ ရဲ့ အသငျး အနနေဲ့ ပွိုငျပှဲလမျးကွောငျးမှာ ကံကောငျးမှု အခြို့ပဲ လိုတယျလို့ မှတျခကျြ ပေးသှားပါတယျ။
ဟားလော့က “ခနျြပီယံလိဂျဟာ ရယူဖို့ ခကျခဲတဲ့ ဖလားလို့ ကြှနျတျော ထငျပါတယျ။ စီးတီးတို့ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ဆှတျခူး နိုငျတယျလို့ ပွောရတာ ကြှနျတျော အရမျး ကွိုကျပါတယျ။ ဒါ ဖွဈလညျး ဖွဈနိုငျ ပါတယျ။ သူတို့ဟာ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ဆှတျခူးဖို့ ရပေနျး အစားဆုံး ၃ ၄ သငျးထဲမှာ ပါဝငျပါတယျ။ သူတို့ဟာ ဒီဖလားကို ဆှတျခူး နိုငျစှမျး ရှိတဲ့ အသငျးတှေ ထဲက တဈသငျး ဖွဈတယျ ဆိုတာ သခြောပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ တော့တငျဟမျ နဲ့ ပှဲက လကျထိဘောတို့ ဘာတို့ ဖွဈခဲ့တာတှကေို ကွညျ့ရငျ ဒါလိုအပျ နတေယျ ဆိုတာ သိနိုငျပါတယျ။ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ဆှတျခူး နိုငျဖို့ အတှကျ ဆိုရငျတော့ ကံတရားရဲ့ ဖေးမမှု အနညျးငယျ လိုအပျ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ဟာ ဖွဈနိုငျစှမျး ရှိတာထကျကို ပိုပါတယျ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
စီးတီးဟာ ဒီရာသီ ခနျြပီယံလိဂျ မှာ အစကောငျးနပွေီး ကစားထားခဲ့ပွီး ဖွဈတဲ့ အုပျစု ပှဲစဉျ ၂ ပှဲစလုံးကို ပေးဂိုး မရှိဘဲ အနိုငျ ရထားပါတယျ။ ဒ့ါကွောငျ့ စီးတီးဟာ အုပျစု စီ မှာ ၃ မှတျ အသာနဲ့ ဦးဆောငျနပွေီး လာမညျ့ ပှဲစဉျကိုတော့ အောကျတိုဘာ ၂၂ ရကျနေ့ အတ်တလနျတာ ကှငျးမှာ သှားကနျ ရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူးနိုင်ဖို့ မန်စီးတီးတို့ ဘာလိုအပ်နေလဲ? – ဟားလော့
မန်ချက်စတာစီးတီး အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူး နိုင်ဖို့ အတွက် လိုတာထက်တောင် ပိုကောင်း နေပေမယ့် ပက်ဂွာဒီယိုလာ ရဲ့ အသင်း အနေနဲ့ ဒီရာသီ ဥရောပ ဆုဖလားကို ကိုင်မြှောက် နိုင်ဖို့ အတွက် ဆိုရင် ကံတရား အနည်းငယ်တော့ လိုအပ် နေတယ်လို့ ကွင်းလယ် ကစားသမားဟောင်း ကယ်ဗင်ဟားလော့က ပြောလိုက် ပါတယ်။
စီးတီးဟာ ဥရောပ ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ဆုဖလားကို သမိုင်းတစ်လျှောက် တစ်ကြိမ်မှ ဆွတ်ခူး ထားခဲ့ခြင်း မရှိသေးဘဲ အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲမှာ ၎င်းတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်မှု ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅-၁၆ ဘောလုံး ရာသီက နည်းပြ မန်နူရယ် ပယ်လီဂရီနီ ရဲ့ လက်အောက်မှာ ဆီမီးဖိုင်နယ် အဆင့်ထိ တက်နိုင် ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပက်ဂွာဒီယိုလာဟာ အဆိုပါ နွေရာသီမှာ ပယ်လီဂရီနီရဲ့ နေရာကို အစားထိုး ၀င်ရောက် လာခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာ အသင်းကို ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ၂ ကြိမ် ဆွတ်ခူး ပေးခဲ့တဲ့ စပိန် နည်းပြရဲ့ မှတ်တမ်းကြောင့် စီးတီး တို့ဟာ သူတို့ အသင်းကို ဥရောပ အောင်မြင်မှု ရယူ ပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့် ထားခဲ့ ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဂွာဒီယိုလာဟာ စီးတီးမှာ ကွာတားဖိုင်နယ် အဆင့်ကို ကျော်ဖြတ် နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသေးဘဲ သူရဲ့ ပထမရာသီမှာ မိုနာကို အသင်းကို နောက်ဆုံး ၁၆ သင်း ရှုံးထွက် အဆင့်မှာ ရှုံးနိမ့် ခဲ့သလို နောက်ရာသီ မှာလည်း လီဗာပူးကို ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ ရှုံးကာ ပြိုင်ပွဲမှ ထွက်ခွာ ခဲ့ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီကလည်း မန်စီးတီးဟာ တော့တင်ဟမ် နဲ့ အကြိတ်အနယ် ကစားခဲ့ရပြီး အဝေးကွင်းမှာ ၁-၀ နဲ့ ရှုံးခဲ့ကာ အီတီဟတ် မှာ ၄-၃ နဲ့ နိုင်ခဲ့ပြီး ပွဲချိန် နောက်ဆုံး မိနစ်မှာ ဂိုးရခဲ့ ပေမယ့် VAR နဲ့ ပြန်လည် ပယ်ဖျက်ခြင်း ခံခဲ့ ရပြီး ကံမကောင်းစွာနဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ် အဆင့်ကပဲ ထွက်ခွာ ခဲ့ရပါတယ်။
စီးတီးဟာ သူတို့ရဲ့ ဥရောပ ပြိုင်ပွဲမှာ စိတ်ပျက် ခဲ့ရမှုကို ပြည်တွင်း ပြိုင်ပွဲမှာ ပြန်လည် ဖာထေး နိုင်ခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို ၂ နှစ်ဆက် ဆွတ်ခူး ထားခဲ့သလို ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက တစ်ရာသီ အတွင်း ပြည်တွင်း ဖလား ၃ လုံး စလုံးကို သိမ်းပိုက် နိုင်တဲ့ ပထမဦးဆုံး အသင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စီးတီး အတွက် ပွဲပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ကစားပေးခဲ့တဲ့ မြောက်အိုင်ယာလန် လက်ရွေးစင်ဟောင်း ဟားလော့ ကတော့ လက်ရှိ စီးတီးရဲ့ လူအင်အားဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကို ကိုင်မြှောက်နိုင်စွမ်း ရှိလောက်အောင်ကို ကောင်းမွန်မှု ရှိတယ်လို့ ဆိုလိုက်ပြီး ဂွာဒီယိုလာ ရဲ့ အသင်း အနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းမှာ ကံကောင်းမှု အချို့ပဲ လိုတယ်လို့ မှတ်ချက် ပေးသွားပါတယ်။
ဟားလော့က “ချန်ပီယံလိဂ်ဟာ ရယူဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ဖလားလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ စီးတီးတို့ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူး နိုင်တယ်လို့ ပြောရတာ ကျွန်တော် အရမ်း ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါ ဖြစ်လည်း ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူးဖို့ ရေပန်း အစားဆုံး ၃ ၄ သင်းထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီဖလားကို ဆွတ်ခူး နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ အသင်းတွေ ထဲက တစ်သင်း ဖြစ်တယ် ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ တော့တင်ဟမ် နဲ့ ပွဲက လက်ထိဘောတို့ ဘာတို့ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ကြည့်ရင် ဒါလိုအပ် နေတယ် ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူး နိုင်ဖို့ အတွက် ဆိုရင်တော့ ကံတရားရဲ့ ဖေးမမှု အနည်းငယ် လိုအပ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ဖြစ်နိုင်စွမ်း ရှိတာထက်ကို ပိုပါတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
စီးတီးဟာ ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် မှာ အစကောင်းနေပြီး ကစားထားခဲ့ပြီး ဖြစ်တဲ့ အုပ်စု ပွဲစဉ် ၂ ပွဲစလုံးကို ပေးဂိုး မရှိဘဲ အနိုင် ရထားပါတယ်။ ဒ့ါကြောင့် စီးတီးဟာ အုပ်စု စီ မှာ ၃ မှတ် အသာနဲ့ ဦးဆောင်နေပြီး လာမည့် ပွဲစဉ်ကိုတော့ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နေ့ အတ္တလန်တာ ကွင်းမှာ သွားကန် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။